UNHCR မှ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ အရေး မည်သည့်နေရာတွင်မှ ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ဓညလင်းနဲ့ အင်တာဗျူး
ဒုက္ခသည်များ အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ →
UNHCR မှ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ အရေး မည်သည့်နေရာတွင်မှ ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိ
ရခိုင်ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆုံးရှုံးနေသော အခွင့်အရေးအတွက် ကော့ဘဇား ယူအန်ရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြနေစဉ်။
” အခု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှာ ရှိနေတဲ့ ရခိုင် ဒုက္ခသည်တွေ အနေနဲ့ ဘဏ်မှာ ယူအန်ကဒ်နဲ့ ငွေစာရင်း (အကောင့်) ဖွင့်လို့လည်း မရဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားက ကူတဲ့ ငွေတချို့ကို Western Union နဲ့ ပို့ခ စရိတ်ငွေ အများကြီး သုံးပီး ပို့ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြား ရွေးစရာ လမ်းမရှိတော့ ဒီလို Western Union ကိုဘဲ အသုံးပြုနေကြရတယ်။ အရင်က ခုလို ပို့ပေးရင် ယူအန် ကဒ်နဲ့ ဘဏ်တွေမှာ ထုတ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါ ထုတ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒါကို ယူအန်က တာဝန်ရှိတဲ့သူကို အကြောင်းကြားတော့ ဒီပြဿာ ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လို ကူညီရမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားတာ မရှိဘူး။ ဒါဟာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။ သူတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ငြင်းလွှတ်ပါတယ်” ဟု သူမက ပြောသည်။
” ဘဏ်မန်နေဂျာ ပြောတာကတော့ ဒုက္ခသည်တွေ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကဒ်နဲ့ အရင်တုန်းက ငွေထုတ် လို့ရပေမဲ့ ခုထုတ်မပေးနိုင်ဘူး။ ပိုက်ဆံ ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီနိုင်ငံက အထောက် အထား တွေပါမှရမယ်။ ဘဏ်က တာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ အကြံပြုချက် အရ တခြားဘဏ်တွေ ၄ ခုလောက် ပြောင်းပြီး ထုတ်ကြည့်တယ်။ မရဘူး။ အားလုံးက ငြင်းတယ်။ ဒီပိုက်ဆံ မရတော့ ခုကျမမှာ စားစရာ နေစရာ မရှိ ဖြစ်နေပါတယ်” ဟု နိရဉ္စရာသို့ ငိုယိုပြီး ပြောသည်။
“ကျနော်ဆိုလို့ရှိရင် ၂၀၀၈-ခုဒီဇင်ဘာလက UNHCR မှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခံထားရသူ ဖြစ်တယ်။ ကတ်ရတဲ့နေ့ကစပြီး ဒီနေ့ထိ ဘာအထောက်ပံ့မှ မရဖူးသေးဘူး။ ဒီနိုင်ငံက ဘာသာ စာပေ လည်း မတတ်တော့ အလုပ်အကိုင်ကလည်းမရနိုင်ဘူးလေ။ ခုဆိုလို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာပဲ ကပ်ခို ပြီးတော့ ထမင်းတောင်း စားနေရတဲ့ ဘ၀ ရောက်နေပါတယ်။ ကျနော့်လို အဖြစ်မျိုး တခြား လူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
Posted on May 19, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.